संकटकाल घोषणा गर्न माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
संकटकाल घोषणा गर्न माग
काठमाडौँ — डेंगुले महामारीको रूप लिइसक्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा विरोध भएको छ । संकटकाल घोषणा गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले संकटकाल घोषणा नगरेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरे । डेंगु लागेका सबैको निःशुल्क उपचार गर्न उनले माग गरेका छन् । ‘डेंगुले महामारीको रूप लिइसक्दा पनि सरकार कुहिरोको काग बनेको छ । मुलुकका ५६ जिल्लामा फैलिएको यो संक्रमण राष्ट्रिय महामारी हो कि होइन ? राष्ट्रिय विपत्ति मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस्तो विपत्तिको सामना गर्न संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? ,’ उनले भने, ‘६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ, कति जनाको मृत्यु भएपछि महामारीको रूप लिन्छ ? ’
बाँके–बर्दियामा फैलिएकै समयमा नियन्त्रण प्रयास नगर्दा डेंगु मुलुकभर फैलिएको उनले बताए । ३ सय ५० रुपैयाँ पर्ने डेंगु जाँच्ने किटको निजी अस्पतालहरूले २ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको जनाउँदै विपत्का बेला कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारसित माग गरे ।
अधिकारीले डेंगु नियन्त्रणका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भन्नेबारेमा सिंगो संसद् र आमजनताले जान्न चाहेको बताए । उनले डेंगु परीक्षणको सुविधा नभएका जिल्लाहरूमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेको कदमबारे सदनलाई जानकारी गराउनसमेत माग गरे ।
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ २१:५५
‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा असहमति’
काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी सरकारले अघि बढाएको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ मा वासिङ्टन पुगेर समर्थन जनाइसके पनि सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘नेपाल सरकार यो रणनीतिमा असहमत रहेको’ बताएका छन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण क्रममा मंगलबार बिहान भेटवार्ता गरेका उनले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा चीनको झैं नेपालको असहमति’ रहेको राय राखेका हुन् ।
चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार ‘चिनियाँ विकासक्रमलाई बाधा पुर्‍याउने अमेरिकी रणनीति’ को विपक्षमा दाहालले धारणा राखेका थिए । ‘चीनको विकास नेपालका लागि सदैव अवसर हो,’ दाहालले विदेशमन्त्री वाङसमक्ष भनेका थिए, ‘चीनको बहुपक्षीय सुरक्षा नीति र सन्तुलित, समावेशी तथा ‘विन–विन’ रणनीतिमा भूमण्डलीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको नेपाल समर्थक रहिआएको छ ।’
उनले हङकङमा देखिएको पछिल्लो स्थितिलाई चीनको आन्तरिक मामला भनेका छन् । चीनले सुरु गरेको आतंकवादविरुद्ध अभियानलाई मानव अधिकारका नाममा अवरोध उब्जाउने प्रवृत्तिको विरोधमा नेपाल उभिएको पनि दाहालले बताएको सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ ।
नेकपामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा विदेश विभाग रहे पनि अध्यक्ष दाहाल आफ्नै छोरीलाई साथ लिएर विदेशमन्त्री भेट गर्न होटल मेरियट पुगेका थिए । विदेशमन्त्रीसँग दाहालको भेटबारे विदेश विभागका अरू पदाधिकारीले ‘कुनै जानकारी नरहेको’ प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । दाहालपछि अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विदेशमन्त्री वाङसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
उनले पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणबारे कुराकानी गरेका थिए ।
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ २०:०८